Bepanhau reNewsDay Rinotanga Kutengeswa
Chikumi 07, 2010
Bepanhau idzva reNewsDay, iro rinodhindwa nekambani yeAlpha Media Holdings, ratanga kutengeswa munyika neMuvhuro. Veruzhinji vanonzi varatidza kurifarira zvikuru zvokuti ranga richitengwa semakeke anopisa.
Alpha Media Holdings inodhinda zvakare mapepanhau anoti Zimbabwe Independent ne Zimbabwe Standard. Muridzi mukuru wekambani iyi, ndiVaTrevor Ncube, avo vanovazve muridzi weMail and Guardian yeku South Africa.
NewsDay riri kutengeswa nemasendi makumi mashanu ekuAmerica. Vaona bepanhau iri vanoti makambani akawanda anga achishambadza zvinhu zvawo mubepanhau iri.
Kambani yeAlpha Media Holdings inoti ine mari inoita mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica iyo ichashandisa paNewsDay, uye ichapinza basa vanhu vanosvika mazana matatu, avo vanosanganisira vatori venhau.
Bepanhau reNewsDay nderimwe remapephanhau mashanu akapihwa marezinesi neZimbabwe Media Commission mwedzi wapera. Rimwe remapepanhau aya akapihwa marezenisi, ndere Daily News, iro rinodhindwa neAssociated Newspapers of Zimbabwe.
Bepanhau re Daily News, pamwe nerimwe raro reDaily News on Sunday, akavharwa nechisimba nehurumende muna 2003, apo vaive gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaJonathan Moyo, vakashandisa vaive sachigaro veMedia and Information Commission, VaTafataona Mahoso, kuti vanyime kambani iyi rezenisi.
Mutevedzeri wasachigaro weMedia Institute of Southern Africa - Zimbabwe, VaNjabulo Ncube, vanoti vafara zvikuru kuona bepanhau iri richitengeswa mumigwagwa neMuvhuro. VaNcube vati vane tarisiro yekuti bepanhau iri richabudirira.
Hurukuro naVaNjabulo Ncube